Taiwan ရှိစက်ရုံတစ်ရုံနှင့်အတူအရည်အသွေးမြင့် Bent Probe ထုတ်လုပ်သူနှင့် Bent Probe ပေးသွင်းသူ၏လမ်းညွှန်ကိုရှာပါ။
Soar Technology Co., Ltd ၏ဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့သူဖြစ်ပါသည် Bent Probe in Taiwan။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်မြင့်မားယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်တာရှည်ခံအရည်အသွေးမြင့်မားကုန်ကြမ်းကို အသုံးပြု. ထုတ်လုပ်ပြီးမတူကွဲပြားသောဖောက်သည်ရဲ့လိုအပ်ချက်တစ်ခုကျယ်ပြန့်တွေလည်းရတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ ရေပန်းစားနေသောနောက်ဆုံးပေါ်ခေတ်ရေစီးကြောင်းနှင့်ကိုက်ညီသောဒီဇိုင်းများနှင့်ပုံစံများကို။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်လည်းသူတို့ရဲ့အလွန်ကောင်းမွန်သောအရည်အသွေး, prompt ကိုဝန်ဆောင်မှုနှင့်သင့်တော်သောစျေးနှုန်းကြောင့်လူသိများကြသည်။
ကျနော်တို့ R & D နှင့်ထုတ်လုပ်မှုတွင်အထူးပြုအလွန်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဒီဇိုင်းနှင့်ထုတ်လုပ်မှုအဖွဲ့အစည်းများ၏အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရှိသည်
။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဒီဇိုင်းနှင့်အလွန်ကောင်းမွန်သောထုတ်ကုန်အရည်အသွေး, စိတ်ရင်းမှန်နဲ့သင်တို့နှင့်အတူနှစ်ရှည်ဖက်စပ်တည်ထောင်ဖို့မျှော်ကြည့်ရှုအရည်အသွေးမြင့်မား products.Very နှင့်အတူဖောက်သည်များကိုအာမခံပါတယ်။
ပုံစံ - Cantilever Probe
အဆိုပါစုံစမ်းစစ်ဆေးသည့်စုံစမ်းစစ်ဆေးကဒ်၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်,အီလက်ထရောနစ်အစိတ်အပိုင်းနှင့်စမ်းသပ်သူအကြား interface ကိုများအတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်,ဒါကြောင့်ဘုတ်အဖွဲ့ကိုအမှန်တကယ်စစ်ဆေးဖို့စစ်ဆေးနိုင်တယ်.
စုံစမ်းစစ်ဆေးသုံးပါ:၎င်းသည် Probe Card ၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပြီးချိတ်ဆက်ထားသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအနေဖြင့်အသုံးပြုသည်.သီးခြားစမ်းသပ်မှုများကိုမြင့်မားစွာခွဲခြားရန်ချစ်ပ်၏ pads များသို့လျှပ်စစ်အချက်ပြခြင်းများပို့ခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်သည်-ချွတ်ယွင်းထုတ်ကုန်များမှအရည်အသွေးထုတ်ကုန်.
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.probe-needles.com/my/bent-probe.html
Bent Probe ၏အကောင်းဆုံးလမ်းညွှန်ကိုစျေး ၀ ယ်ပါ။ Bent Probe ကုန်ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူနှင့်ဖြန့်ချိသူ Bent Probe ၏အမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးကိုသိရန်လိုအပ်သည်။ Taiwan
ဘီရီလီယမ်သည်ကြေးနီမဟုတ်ပါ-သံလိုက်,မဟုတ်-မြင့်မားသော sparking-အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့သတ္တုလုပ်ကိုင်နိုင်စွမ်းနှင့်အတူအစွမ်းသတ္တိကိုပစ္စည်း,ပုံစံနှင့်အခြားဂုဏ်သတ္တိများ.၎င်းသည်အန္တရာယ်ရှိသောပတ်ဝန်းကျင်တွင်အသုံးချခြင်းများစွာရှိသည်,တူရိယာ,တိကျတိုင်းတာခြင်း devices များ,ခဲယမ်းမီးကျောက်နှင့်အာကာသ.ဘီရီလီယမ်ကြေးနီဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောဝါယာကြိုးများသည်ပုံစံအမျိုးမျိုးရှိနိုင်သည်,ထိုကဲ့သို့သောပတ်ပတ်လည်အဖြစ်,စတုရန်း,ပြားချပ်ချပ်သို့မဟုတ်စိတ်ကြိုက်,နှင့် reels အပေါ်အနာနိုင်ပါတယ်,ချဉ်,သို့မဟုတ်ဖြောင့်မျဉ်းကြောင်းအတွက်တင်ပြခဲ့သည်.ဖြည့်စွက်ကာ,ဘီရီလီယမ်သည်ကြေးနီကိုတိုက်စားခြင်းကြောင့်မဟုတ်ပါ-အက်ဆစ်ဓာတ်(ထိုကဲ့သို့သော Hydrochloric acid ကိုအဖြစ်,ကာဗွန်အက်စစ်),ပလပ်စတစ်ပြိုကွဲထုတ်ကုန်ခုခံ,ပွန်းပဲ့ခြင်းနှင့်ပွန်းပဲ့.ထို့အပြင်,ဘီရီလီယမ်ကိုကြေးနီအပူ ပေး၍ ကုသနိုင်သည်,ထိုကဲ့သို့သောအသက်အရွယ်ခိုင်မာခြင်းနှင့် tempering အဖြစ်,၎င်း၏အစွမ်းသတ္တိကိုတိုးတက်စေရန်,ကြာရှည်ခံမှုနှင့်စီးကူးခြင်း.